Ramamimampionona G. : “Aoka tsy hilavo lefona” | NewsMada
Ramamimampionona G. : “Aoka tsy hilavo lefona”
Tsy misy resaka saina fotsy. “Mbola ao anatin’ny ady sy tolona isika amin’izao. Io valanaretina Covid-19 io sy ny hanoanana no fahavalo atrehintsika. Manoloana izay ady sy tolona izay, miatrika ady hatramin’ny farany ny soatoavintsika malagasy. Tsy misy an’izany milavo lefona izany.“
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha lefitry ny Conseil du fampihavanana malagasy (CFM), faritany Antananarivo, Ramamimampionona Gérard, momba ny fiatrehana ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 amin’izao fotoana izao. Ny antsika Malagasy: ny anongotsongoana ny maty, mba tsy handevenam-belona. Ny dikan’izany: miady hatramin’ny farany isika.
Ny fihavanana no hery…
Ny tena zava-dehibe, tsy fananganana saina fotsy na milavo lefona, sanatria. Rehefa eo anatrehan’ny fahavalo ny Malagasy: inona ny hery entintsika miatrika an’izany? Ny fihavanana no hery amin’ny Malagasy. Ao anatin’izay, mifankahery ny rehetra ary tsy manao izay hahakely hery ny sasany. Mahatonga izay fahakelezana hery izay ny tsy fandriampahalemana sy ny tsy fitoniana eo anivon’ny tsirairay sy ny fiarahamonina. Ilaina ny fampanjakana izay fandriampahalemana sy fitoniana izay. Samy mba miezaka miasa sy mamokatra koa…
“Izay fahazoantsika miasa sy mamokatra izay no antoky ny fandriampahalemana amin’ny sehatra maro izay ho lavareny rehefa kelikely eo“, hoy izy. Mba serasera tsara sy mety ary avo lenta no atao: fifankaherezana, mampiray, mitarika filaminana amin’ny sehatra rehetra. Tsy mamono ny ain’ny hafa ary tsy mangalatra na manimba ny fananan’ny hafa fa mahakely aina avokoa izany.